Baidoa Media Center » 10 SABABOOD DARTOOD MADAXWEYNE XASAN SHEEKH MAXAMUUD FARMAAJO HA UGU MAGACAABO RAIISAL WASAARAHA DALKA!
10 SABABOOD DARTOOD MADAXWEYNE XASAN SHEEKH MAXAMUUD FARMAAJO HA UGU MAGACAABO RAIISAL WASAARAHA DALKA!
September 23, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Muqdisho- Ugu Horeyn waxaan halkan Duco uga dirayaa dhamaan dulmanayaashii Soomaaliyeed ee iyagoo aan waxba galabsan sida naxariis darada ah loogu laayey Baarka Village eek u yaalay daarta Hooyooyinka.
Farmaajo kama mid aha dadka muddada dheer siyaasadda ku soo jiray ee wax qabad la’aanta iyo musuqmaasuqa ku eedeysan, balse cagsigeeda ayuu ku amaanan yahay mudo gaaban iyo wax qabad wanaagsan.
Isagoo hawshiisa lagu wada qanacsan yahay ayey labo shariif ku tuureen Kampala Accord, laakiin qalad uu galay kuma iman tuurista, waxaana loo arkaa muwaadin aamin ah.
Wuxuu Hay’adaha ciidanka ku dhex leeyahay asxaab ay ugu horeeyaan taliyeyaasha oo isaga u haya abaal, waayo wuxuu ahaa ninkii dhisay ee mushaarkana u bilaabay.
Nadaanka yar ee dowladda u dhisan ee laga dhaxlay dowladdii hore isaga ayaa dhisay, wuxuuna ku muteystay sumcad dhanka dadweynaha ah oo aan weli dhicin.
Waa qof xog ogaal u ah dabinada siyaasadeed ee u dhigan dowladda cusub, dabin-caayaraasha oo dhamina wuu fahmayaa wuuna furfuri karaa.
Wuxuu si fudud ku kala shaandheyn karaa maamulka iyo dadka ku haboon xilli walba. Wuuna fahmi karaa dheelaha ay madaxweynaha cusub Md. Xasan Sheekh Maxamuud la ciyaarayaan hogaamiyeyaashii ku hungoobay talada dalka.
Waa siyaasi ay bulshada jeceshahay oo ay magacaabistiisana u riyaaqi doonto, isla markaasna kalsoonidaas uu dadweynaha ka heysto waxa ay keeni kartaa in dowladdiisa ay hesho wada shaqeyn dadweyne oo aad u weyn.
Waa daacad oo waxaa ka go’an in dalkan iyo dadka ay ka baxaan magansiga gargaarka, isla markaasna iyaga noqdaan dad isku filan.
Waa nin yaqaana sida loo canaanto ajaaniibta daneysa arrimaha Soomaaliya ee ay ugu horeyso UN-ka.
Waa siyaasi dhanka maamulka aqoon u leh oo aan hawshiisa gacanyare ku aaminin balse isaga qabsada, waana hawl kar caaboon.
Wixii talo iyo dhaliil ah ku soo hagaaji email:Abukar.albadri@gmail.com